China Hoodie ifektri abakhiqizi | Umbono
Lawa ma-hoodi enziwa ngezifiso anokulingana okwedlulele, i-boxy fit kanye nephakethe lesikhwama esingeziwe esikhulu, njenge-sweatshirt yesikole esidala. Izingane, intsha, nabantu abadala bazoyithokozela ingaphakathi elithambile futhi badabule ilebuli yentamo. Inhlanganisela kakotini ye-polyester isho ukuthi mancane amathuba okuthi anciphe.
Lawa ma-hoodi enziwa ngezifiso anokusayizi okukhulu, i-boxy fit kanye nephakethe lesikhwama esingeziwe esikhulu, njenge-sweatshirt yesikole esidala. Izingane, intsha, nabantu abadala bazoyithokozela ingaphakathi elithambile futhi badabule ilebuli yentamo. Inhlanganisela kakotini ye-polyester isho ukuthi mancane amathuba okuthi anciphe.
Ngemibala engaphezu kwengu-20 etholakalayo, lawa ma-pullover hoodies alungele iqembu lakho noma umcimbi okhethekile. Ziza ngemibala eqinisekisiwe ebonakalayo, futhi, ezenza zilungele ukuklama iklabhu yakho egijima noma i-crew yangaphandle yomsebenzi. Futhi, okwenziwe ngezifiso kungenziwa, udinga nje ukunikeza ikhodi yakho yombala ye-pantone oyithandayo.
amasentimitha Usayizi S M L XL 2XL 3XL 4XL
Ubude 26.5 27.5 28.5 29.5 30 30.5 31
ububanzi 20 22 24 26 28 30 32
Langaphambilini ukuphrinta ngokwezifiso i-polyester engenalutho esebenzisa ilogo yehembe
Olandelayo: i-wholesale polyester spandex mens ezemidlalo ithrekhi yokwelula ukujuluka kwamabhulukwe ngomugqa wohlangothi
Kwenziwe ngentando Hoodies Ephrintiwe